Shina fananganana firafitra sy orinasa Factory | XY Tower
Ny firafitry ny substation no rafitra mpanohana ny tariby elektrika, ny fanovana ary ny fitaovana hafa. Any ivelany, ny firafitry ny substation dia misy vy metaly makarakara, firafitra vy tubular ary ireo karazany hafa.
XY Tower dia niandry ho an'ny mpanjifanay, marindrano miorina amin'ny maotera izay afaka mamaly ny fitakian'ny indostrian'ny herinaratra. Natao araka ny fenitra ISO, ireo firafitra misolo tena ireo dia namboarina tao amin'ny tranontsika tamim-pitandremana fatratra. Ireo firafitra misolo tena ireo dia sedraina mafy mba hahazoana antoka fa tena mahomby sy mahomby amin'ny asa. Miaraka amin'ny fahalalana matihanina ny tsipika fampitana sy ny tsipika fampifandraisana mifandraika amin'ny grid. Ny vokatra dia manarona firafitra Substation 33kV-500kV
Anaran'ny vokatra Rafitra fananganana
Takelaka fototra Ny takelaka fototra dia toradroa / boribory / Polygon misy lavaka misavoana ho an'ny bolt vatofantsika sy ny refy arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Fiarahan'ny tsato-kazo Slip joint, flanged mifandray
fahafahana 5.000 taonina / taona
Previous: Herin'ny lakroa elektrika
Manaraka: tilikambo ambony tafo
Fiovan'ny herinaratra elektrika
Fiovan'ny herinaratra avo